GoldBlocks စျေး - အွန်လိုင်း GB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GoldBlocks (GB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GoldBlocks (GB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GoldBlocks ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $38 591.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GoldBlocks တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GoldBlocks များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GoldBlocksGB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0007GoldBlocksGB သို့ ယူရိုEUR€0.000591GoldBlocksGB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000534GoldBlocksGB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000637GoldBlocksGB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00622GoldBlocksGB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0044GoldBlocksGB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0154GoldBlocksGB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0026GoldBlocksGB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000926GoldBlocksGB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000976GoldBlocksGB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0156GoldBlocksGB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00543GoldBlocksGB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0038GoldBlocksGB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0524GoldBlocksGB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.118GoldBlocksGB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00096GoldBlocksGB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00107GoldBlocksGB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0217GoldBlocksGB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00486GoldBlocksGB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0748GoldBlocksGB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.829GoldBlocksGB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.269GoldBlocksGB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0514GoldBlocksGB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0193
GoldBlocksGB သို့ BitcoinBTC0.00000006 GoldBlocksGB သို့ EthereumETH0.000002 GoldBlocksGB သို့ LitecoinLTC0.00001 GoldBlocksGB သို့ DigitalCashDASH0.000008 GoldBlocksGB သို့ MoneroXMR0.000008 GoldBlocksGB သို့ NxtNXT0.0546 GoldBlocksGB သို့ Ethereum ClassicETC0.000103 GoldBlocksGB သို့ DogecoinDOGE0.202 GoldBlocksGB သို့ ZCashZEC0.000008 GoldBlocksGB သို့ BitsharesBTS0.0216 GoldBlocksGB သို့ DigiByteDGB0.0224 GoldBlocksGB သို့ RippleXRP0.00249 GoldBlocksGB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 GoldBlocksGB သို့ PeerCoinPPC0.00232 GoldBlocksGB သို့ CraigsCoinCRAIG0.319 GoldBlocksGB သို့ BitstakeXBS0.0299 GoldBlocksGB သို့ PayCoinXPY0.0122 GoldBlocksGB သို့ ProsperCoinPRC0.0878 GoldBlocksGB သို့ YbCoinYBC0.0000004 GoldBlocksGB သို့ DarkKushDANK0.225 GoldBlocksGB သို့ GiveCoinGIVE1.52 GoldBlocksGB သို့ KoboCoinKOBO0.16 GoldBlocksGB သို့ DarkTokenDT0.000645 GoldBlocksGB သို့ CETUS CoinCETI2.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 11:00:03 +0000.